Monday May 11, 2020 - 20:47:49 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Dayactirka Isbitalka Banaadir ayaa waxaa iska kaashanaya Hormuud Foundation iyo Shirkada Dhismaha Buruuj, waxaana mashruucan uu dabooli doonaa baahida loo qabo in la helo isbitaal labaad oo lagula tacaalo dadka qaba ama uu soo rito cudurka Corona Vir
Dayactirka Isbitalka Banaadir ayaa waxaa iska kaashanaya Hormuud Foundation iyo Shirkada Dhismaha Buruuj, waxaana mashruucan uu dabooli doonaa baahida loo qabo in la helo isbitaal labaad oo lagula tacaalo dadka qaba ama uu soo rito cudurka Corona Virus.
Agaasimaha isbitaalka banaadir Drs Fartuun Shariif Maxamed oo ugu horeyn kahadashay goobta lagusoo bandhigayay mashruuca ayaa sheegtay in qeeybta dayactirka lagu wado ee loogu tala galay in ladhigo bukaanada la il daran corona viruse in uusan saameen kuyeelan doonin qeybaha kale ee hoyada iyo dhalaanka.
Madaxa injineerada shirkadda dhismaha Buruuj Eng. Cumar Maxamed Maxamuud (Aftooje) ayaa sheegay in mudo kooban ay ku soo gabagabeyn doonaan dayactirka isbitaalka Banaadir qeybta loogu tala galay bukaanada qaba COVID-19 islamarkaana ay uqalabeen doonaan qaab casri ah.
Madaxa Hormuud Foundation Cabdullahi Nuur Cusmaan ayaa sheegay in mashruucan uu qayb kayahay kaalinta shirkadda isgaarsiinta hormuud ay ka qaadanayso dib u dhiska dalka iyo latacaalida cudurka corona virus waxaana uu hoosta kaxariiqay in shirkada hormuud ay lacago fara badan kubixinayso latacaalida cudurka iyo wax kaqabashadiisa saameenta bulshada uu kuleeyahay.
Xubno katirsan Ururada bulshada, Baweenka Gobolka Banaadir, Rugta Ganacsiga iyo Warshadaha iyo Baarlamaanka Somalia oo iyana goobta kahadlay ayaa ku amaanay shirkadda isgaarsiinta hormuud kaalinta ay kaga jirto bulshada iyo sida mar waliba madaxdeeda ay ugu heelanyihiin kaqeyb qaadashada gurmadka dadka Soomaaliyeed.
Kororka ku yimid dadka uusoo ridanayo cudurka COVID-19 ayaa keentay in ay timaado baahi loo qabo isbitaal labaad oo lajiifiyo bukaanada cudurka uu soo rito waxaana shirkada isgaarsiinta hormuud ay dhabarka uridatay bixinta qarashaadka kubaxaya dhisida iyo dayactirka goobahaasi labaad iyo qalabeenteeda halka shirkada dhismaha buruuj ay door weyn kaciyaarayso fulinta mashruuca.